कस्तो अचम्म? « Light Nepal
कस्तो अनौठो चलन जहाँ वर्षमा ५ दिन महिला नाङ्गै बस्छन् !
एजेन्सी हामिले बिभिन्न अनौठा कुराहरुसुन्दै र देख्दैपनि आइराखेका छौ ।संसारमा कुनै यस्ता चलन हुन्छन्जुन सुन्दा हामिलाइ पत्यार नै लाग्दैन । त्यस्ता चलन हामिले देख्दै र सुन्दै पनि आइरहेका छौ ।
एजेन्सी – चीन एक बिकसित देश हो जसले बिभिन्न अनौठो प्रबिधिको बिकास गरिरहेको छ । यसैक्रममा चीनले अपराधी पहिचान गर्ने एक नौलो प्रबिधिको बिकास गरेको छ ।अपराधी पहिचानका लागि भन्दै
यो अचम्मको बिवाह : यी ८ तस्बिरमा हेर्नुहोस बुलेट मोटरसाइकल चलाएर जन्तीसहित दुलाहा लिन पुगिन् दुलही
एजेन्सी – संसारमा दिनदिनै अचम्म र अनौठा क्रियाकलापहरु भैरहेका हुन्छन् । यस्ता अनौठा कार्यले सामाजिक संजालसंगै मिडामा खुबै स्थानपनि पाउने गर्छन । यस्तै भर्खरै मात्र्र भारत पुनेमा रहेको दौंड भन्ने ठाउँमा
काठमाडौं – पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री आन्तोनियो कोस्ता सर्वसाधारणसँगै स्थानीय रुटको गाडी चढेर वडा कार्यालयमा गएका छन्। प्रधानमन्त्री एन्तोनियो बिहीबार बिहानै राजधानी लिस्बनको ७४६ रुटको सार्वजनिक बसको यात्रामा भेटिएका हुन्। बिहीबार बिहानको
अचम्मको चलन जहाँ बिहे अघि बेहुलालाई रामधुलाई नगरी बिहे गरिँदैन
एजेन्सी – विवाहका चलन पनि अचम्म अचम्मका हुन्छन् । यस्तै, एउटा अचम्मको चलन छ दक्षिण कोरियामा । कोरियाको एउटा परम्परा अनुसार बिबाहअघि बेहुलालाई रामधुलाई गरिन्छ । बिहेको केही दिन अघि
यस्तो अनौठो संस्कार जहाँ मान्छे मरेपछि शव गिद्धलाई खुवाईन्छ
छिमेकी तिब्बतको एउटा अनौठो संस्कारका बारेमा तपाईं हामीमध्ये कमैलाई थाहा होला । तिब्बतमा कुनै मान्छेको मृत्यु भएपछि उसको शवलाई न त जलाईन्छ, न त खाल्डो खनेर गाडिन्छ । तर तिब्बतमा
गधाको दुधले दैनिक नुहाउँने यी रानी, जसले आफ्नो सुन्दरताको वशमा फसाएर सयौं पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध राखिन्
काठमाडौं – हामि पानीले नुहाउने गर्छौ तर कुनैले दूधले नुहाउने गर्छन भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । संसारमा यस्ता मानिस पनि थिए्, जो दैनिक गधाको दूधले नुहाउने गर्छन् । प्राचीन कालकी
जव एक महिना अगाडि मात्रै किनेको आइफोन-एक्स गोजीभित्रै पड्किएपछि…
एजेन्सी – अमेरिकामा भर्खरै यस्तो घटना घटेको छ जसले ढुक्कसँग एप्पलले उत्पादन गरेका नयाँ नयाँ संस्करणका आइफोन प्रयोगकर्ताहरूलाई झस्काउन सक्छ । सन् २०१८ मा लंच गरिएको एप्पलको आइफोन-एक्समा आफैँ आगो
नाकले बताउँछ लिंगको आकार ! यसरि पत्ता लगाउन सकिन्छ
काठमाडौं । पुरुषको लिंगको आकार तथा प्रकारका बारेमा निकै चर्चा हुन्छन् । लिंग सामान्यतः सबै पुरुषको एकै प्रकारको हुँदैन । भिन्न भिन्न पुरुषको आफ्नै प्रकृतिको लिंग हुन्छ । जस्तैः बाङ्गो,